Raysul Wasaare Rooble oo maanta tagaya Magaalada Baydhabo. - Axadle | Wararka Africa
Raysul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble ayaa safarkiisii ugu horeeyay tan & markii xilka Wasiirka koowaad ee Dalka loo magacaabay maanta ku tagaya Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Bay.
Ammaanka Magaalada Baydhabo oo xarun KMG ah u ah DG Koofur Galbeed ayaa la adkeeyay, waxaana waddooyinka la dhigay ciidamo kala duwan si ay qayb uga noqdaan xasilinta inta uu booqashada ku howlan yahay Wasiirka Koowaad ee Soomaaliya.
Waddooyinka waaweyn gaar ahaan inta u dhaxeysa Garoonka Diyaaradaha ee Shaati gaduud ilaa madaxtooyada waxaa lagu dhajiyay sawirka Raysul Wasaaraha Soomaaliya iyo qoraalla ka tarjumaya soo dhaweyntiisa Baydhabo.
Inkasta oo aysan faah-faahin Xukuumadda Soomaaliya iyo DG Koofur Galbeed Safarka Maxamed Xuseen Rooble, balse warar Axadle ay ka heshay Magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in labo arrin uu salka ku haya.
Qorhaha 1-aad waxa uu la kulmayaa qaybaha kala duwan ee Bulshada iyo maamulka Koofur Galbeed si uu uga xog dhageysto xaaladda doorashada, diyaargarowga & guuxa siyaasadeed ee socda.
Qodobka labaad ayaa ah in uu qiimeynayo xarunta KMG ah ee DG Koofur Galbeed oo uu ka socda wada-tashi looga hadlaya dastuurka Dalka oo maalmihii lasoo dhaafay Wasaaradda Dastuurka XFS ay ku howlaneen arrintaas.